Nnwom 49 NA-TWI - Ahonya mu ahotoso yɛ nkwaseasɛm - Bible Gateway
Nnwom 48Nnwom 50
Nnwom 49 Nkwa Asem (NA-TWI)
49 Obiara ntie saa asɛm yi! Muntie, nnipa a mowɔ mmaa nyinaa, 2 akɛse ne nketewa, adefo ne ahiafo nyinaa. 3 M’adwenem bɛdɔ. Mɛka anyansasɛm. 4 Mebu bɛ na makyerɛ ase bere a merebɔ me sanku. 5 Minsuro bɔne bi bere a atamfo 6 ne nnebɔneyɛfo a wɔde wɔn ho to ahonya so na wɔhoahoa wɔn ho wɔ wɔn ahonya mu no atwa me ho ahyia. 7 Onipa ntumi nnye ne ho mfi ɔhaw mu; ɔrentumi ntua ne nkwa ho ka mma Onyankopɔn. 8 Efisɛ, onipa nkwa so akatua bo yɛ den. Nea obetumi atua no 9 rentumi ntwe no mfi damoa mu mma ɔntena nkwa mu daa daa.